Octoparse: Tranonkala mahomby mahomby - Semalt Expert
Zava-mahomby mahomby ho an'ny mpikaroka sy ny orinasa mikaroka izay mitady Ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto isan-karazany, toy ny Facebook, Amazon, eBay automatique. Octoparse dia programa rindrambaiko lehibe izay manome ny mpampiasa azy sasantsasany fitahirizana lehibe hanangonam-baovao ary hamadika izany amin'ny dossier'ny sary toy ny HTML, Excel, ary TXT. Ireto manaraka ireto ny safidy lehibe natolotr'i Octoparse:
Extracts Data avy amin'ny tranonkala maimaim-poana
Octoparse dia fitaovana mora ampiasaina izay manampy ireo mpisera avy amin'ny tranonkala - newsboy winter hats. Izy io dia miasa miaraka amin'ny tranonkala maimaim-poana, anisan'izany ny angon-drakitra amin'ny pagination. Ankoatra izany, ny sampan-draharahan'ny rahona dia afaka mahazo sy mitahiry angona betsaka.
Manangona ireo rakitra miafina ao amin'ny tranokala
Amin'ny tranga marobe, ny mpikaroka webhd dia mikaroka finday manokana avy amin'ny tranonkala, saingy tsy mahita ny vaovao ilaina izy ireo satria amin'ny tranokala iray na ny antony hafa. Ny Octoparse dia afaka mahita sy mamono ny votoaty miafina.
Nahazo Content miaraka amin'ny horonan-tsarimihetsika tsy misy farany
Mety ho asa sarotra ny famakiana rakitra amin'ny rakitra tsy misy fetra. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia mila mivezivezy any amin'ny farany ambany amin'ny tranonkalan'ny vohikala mitsidika azy ireo hametra bebe kokoa lahatsoratra na sary. Halefa tsy tapaka ny votoaty rehefa mihodina any amin'ny faran'ny pejy izy ireo.
Octoparse dia afaka manampy ny mpisera hamoaka ny rohy rehetra navoaka tao amin'ny tranonkala iray. Raha ny marina, dia manome fomba tsotra hanapariahana IP IP an-jatony ny mpampiasa, ary manome azy safidy maro hafa, toa an'i Ajax Timeout, fananganana XPath fitaovana, sns.Ankoatra izany, Octoparse dia afaka mandady ny angona ho an'ny mpikaroka amin'ny Internet miaraka amin'ny fangatahana manokana ary mamita amin'ny fomba mahomby ny angona azo antoka.
Zarazarao ny Asa
Ho an'ny mpampiasa, tsara kokoa ny mizara ny asany, raha toa ka tapaka ny aterineto. Raha tokony hanangona ny antontan-taratasiny hatrany am-boalohany izy ireo, dia afaka manasaraka ny tetikasa iray ho tetikasa roa.
Amin'ny Octoparse, ireo mpampiasa tranonkala dia afaka manao zavatra be dia be, toy ny fanokafana pejin'ny tranonkala iray, hiditra ao amin'ny kaonty, maka sary, miditra lahatsoratra ary maro hafa. Octoparse ihany koa dia manome ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny fomba haingana mba hanampiana azy ireo hiatrika sarany sarotra kokoa. Ohatra, ny fampiasana io fomba io, dia mila mandefa sy mametraka ireo sakana ao anatin'ny rafitra mpamorona ny mpampiasa mba hampifanaraka ireo asa samihafa. Ny fomba mahazatra dia manome ny mpampiasa ny safidy hanodina pejy web ho azy amin'ny Excel amin'ny alalan'ny bokotra iray fotsiny. Amin'ny ankapobeny, ity fomba ity dia miasa tsara amin'ny takelaka misy ny lisitry ny lisitra, toy ny valin'ny fikarohana na ny sokajy sokajy.